News Collection: कामचलाउ हेराइ
नेपालको इतिहास मै सबैभन्दा बढी समयसम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने कीर्तिमान राखेका माधवकुमार नेपाल मोहित भएर जसलाई हेरिरहेका छन्, उनी अमीरा हुन्। बीचमा उभिएको चाहिँ साउदी राजकुमार (उहिले नेपालमा राजपरिवार हुँदा जसलाई शाहज्यादा भन्थे, त्यही हैसियतका। वर्तमान राजा अब्दुल्लाका भतिज हुन्) अल वलिद विन तलाल हुन्। हाम्रा प्रधानमन्त्री माधवज्युलाई मोहित बनाउने को रहिछिन् त यी सुन्दरी आउनुस्, थप फोटो र छोटो परिचय खोजौँ।
यी सुन्दरीको नाम प्रिन्सेस अमीरा हो। उनी विश्वका धनीहरुको सूचिमा १९ औँ नम्बरमा पर्ने विन तलालकी चौथी पत्‍नी हुन्। साउदी राजा साउद बिन अब्दुल अजिज अल साउदले धेरै पटक बिहे गरे। उनका ५६ छोरा र ५४ छोरी छन्। ती मध्ये एक राजकुमारी दलालको यी राजकुमार बिन तलालसित पहिलो बिहे भएको थियो। उनीहरुको अहिले सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ। जोडीका दुई सन्तान पनि छन्।
बिन तलालले अर्को दुई बिहे पनि साउदी राजपरिवार भित्रैकी राजकुमारीसित गरेका थिए। यी अमीरा भने साउदी राजपरिवार बाहिरका हुन्। सन् २००६ मा बिन तलालले यिनीसँग बिहे गरेका हुन्। आजभोलि बाहिर जाँदा उनले अमीरालाई नै लिएर जाने गरेका छन्।
बिन तलालकी पत्‍नी भए पनि यिनलाई रोयल हाइनेस भनिँदैन। उनलाई मात्र प्रिन्सेस भनी पुकारिन्छ।
साउदी अरबमा महिलालाई निकै कम अधिकार दिइन्छ। गाडीसमेत चलाउन पाउँदैनन् साउदी महिला। तर अमीराले भने पहिलो पटक राजपरिवारभित्रैका सदस्य भएर पनि कार चलाइन्। कट्टरपन्थी मुल्लाहरुको देशमा उनको यो कदमलाई सबैले अचम्मका साथ हेरेका थिए।
यिनी अमेरिकी मूलकी हुन्। अमेरिकी मूलकी भएर पनि साउदी राजपरिवारसँग नाता गाँस्ने उनी एक मात्र उदाहरण हुन्। कट्टर मुस्लिम देशकी राजकुमारी भएर पनि उनी बुर्कामा हैन, आधुनिक पहिरनमा ठाँट्टिएर हिँडछिन्। नेपालमा पनि उनले हाइ हिल जुत्ता र मनमोहक पहिरनमा सजिएर विशिष्ट व्यक्तिहरुसित भेट र घुमघाम गरेकी थिइन्।
उनका पति राजकुमार बिन तलाल कसरी विश्वका १९ औँ धनी बने ? त्यो पनि रोचक छ। उनी राजकुमार हुन् र शक्ति कै प्रभावका कारण उनले आफ्नो धन बढाउँदै लैजाने अवसर पाएका हुन्। उनले आफ्नो व्यापारको सुरुवात साउदी अरेबियाको एउटा स्थानीय बैङ्कको सानो परिमाणको सेयर किनेर गरेका रहेछन्। राजकुमार भएपछि बोर्ड सदस्य हुन पाउनु पर्छ भनेर उनले माग गरे, उनलाई रोक्ने कोही भएनन्। अनि उनी कम सेयर भए पनि बोर्डमा पुगे। उच्च ओहोदामा पुगेपछि उनले आफ्नो अर्को कम्पनीलाई सिटी ब्याङ्क (सिटी ग्रुप भनिन्छ अहिले) का सेयर खरिद गर्न प्रशस्तै ऋण दिने निर्णय गराए। स्थानीय ब्याङ्कको पैसा विदेशी कम्पनीमा ऋण दिन नपाइने नियम तोडेर शक्तिको प्रभावमा आफूसम्बन्धित कम्पनीहरुमा लगानी गर्न लगाए। हुँदाहुँदा उनले साउदी अरबको दोस्रो ठूलो बैङ्कमा बनाउन सके। साउदी अरबका अधिकारीहरुले उनीहरुको उनको मनसाय बुझेर नै यो नयाँ बैङ्क (साम्बा)को प्रमुख कार्यकारीमा उनलाई रहन रोक लगाएका थिए। उनले आफ्नो चलाखी त प्रयोग गरेका थिए नै, शक्तिका कारण अधिक प्रयास बिना नै पैसा उनीतर्फ तानिएको हो। जस्तोसुकै गरी कमाएको होस्, नेपालमा अलि गतिलै क्षेत्रमा लगानी गरिदिए त नेपालीका लागि राम्रै हुन्थ्यो। तर काठमाडौँका सडकमा बेच्न राखिएको एक किलो स्याउ किन्ने र कपनको पसलमा गएर चिजबलको भाउ सोध्ने बाहेक उनले लगानीको अहिलेसम्म इच्छा मात्रै देखाएका छन्- होटल र एयरलाइन्समा। सरलता राम्रो लाग्यो उनको। मज्जाले फटाफट हिँड्ने रहेछन् उनी काठमाडौँका सडकमा समेत। कपनको एउटा पसलमा लगानी सोध्दा ४० डलर (३ हजार रुपैयाँ) को जवाफ पाएर अचम्भित भएका उनले हजार डलर भए नेपालमा गतिलै लगानी गर्छु भनेर त सोचेनन् ? लौ जे होस्, नेपालले सबैभन्दा विशिष्ट विभुषण दिएको छ उनलाई। यसवापत् गतिलै लगानी भित्रियोस् भन्ने कामना !